သတင်းBy thin zar ဧပြီ 29, 2020
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၈ ရက်၊ နေပြည်တော် (၂/၅၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများအစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ် အစည်းအဝေးများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၇- ၂၈ ရက်နေ့တို့တွင် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ (၂/၅၁) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ အဆင့်မြင့် စီးပွားရေးအရာရှိများ အစည်းအဝေးနှင့်အတူ အာဆီယံ-တရုတ် ၊ အာဆီယံ-ဂျပန် ၊ အာဆီယံ-ကိုရီးယား၊ အာဆီယံ အပေါင်းသုံး ၊ အာဆီယံ-ကနေဒါ အဆင့်မြင့်အရာရှိများ အစည်းအဝေး ၊ စုစုပေါင်း အစည်း အဝေး(၆) ခုကို ကျင်းပသည်။ အစည်းအဝေးများတွင် အာဆီယံ စီးပွားရေး အသိုက်အဝန်း အကောင်အထည်ဖော်မှု ကိစ္စရပ်များ၊ အာဆီယံနှင့် တရုတ် ၊ ဂျပန်နှင့်…
(၂၉) ကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှု ကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို Video Conference ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်
သတင်းBy phyu su htwe ဧပြီ 27, 2020
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၄ ရက်၊ နေပြည်တော် (၂၉) ကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၄ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Iman Pambagyo က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့ရှိ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီး Facilitator အဖြစ် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ရေး…
(၂၉) ကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှု ကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို Video Conference ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်
သတင်းBy thin zar ဧပြီ 24, 2020
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၂ ရက်၊ နေပြည်တော် (၂၉) ကြိမ်မြောက် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှုကော်မတီ၏ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဧပြီလ ၂၂ ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်ရေးညှိနှိုင်းမှု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Iman Pambagyo က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ဂျကာတာမြို့ရှိ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ အစည်းအဝေးသဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပြီး Facilitator အဖြစ် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ စက်မှုနှင့် စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ ကုန်သွယ်ရေး…
သတင်းBy phyu su htwe မတ် 10, 2020
(၅–၃–၂၀၂၀၊ နေပြည်တော်) မြန်မာ-ဆွစ်ဇာလန် နှစ်နိုင်ငံတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲ ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆွေးနွေးပွဲကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ချုပ်၊ ဦးသန်းအောင်ကျော် နှင့် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဆွစ်ဇာလန်သံရုံးမှ Minister, Deputy Head of Mission/Head of Cooperation ဖြစ်သူ Mr. Giacomo Solari တို့မှ ပူးတွဲသဘာပတိများ အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ဆွေးနွေးပွဲတွင် မြန်မာ-ဆွစ်ဇာလန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အစီအစဉ်သစ် (2019-2023) New Swiss Cooperation Programme (2019-2023) နှင့် စပ်လျဉ်း၍…
သတင်းBy phyu su htwe ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 11, 2020
နိုင်ငံခြားအကူအညီ၊ အထောက်အပံ့၊ နည်းပညာ အကူအညီနှင့် ချေးငွေေစီမံချက် စာရင်း များ ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ရရှိရေး၊ အရည်အသွေးရှိသော ကိန်းဂဏန်းများဖြစ်စေရေးနှင့် ထိရောက် မှုရှိသော ဖော်ပြချက်များ ဖြစ်စေရေး ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် နိုင်ငံခြားအကူအညီ၊ အထောက်အပံ့၊ နည်းပညာ အကူအညီနှင့် ချေးငွေရယူကာ စီမံချက်များ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ/ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးမှုများကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့မှစ၍ ဖေဖော်ဝါရီလ ၇ ရက်နေ့အထိ (၁၅) ရက်ကြာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီး ဌာနတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ဗဟို အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံခြားအကူအညီ၊ အထောက်အပံ့၊ နည်းပညာ အကူအညီနှင့် ချေးငွေ စာရင်းအချက်အလက်များကို…
ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (DACU) လုပ်ငန်းအဆင့် အစည်းအဝေး (၃/၂၀၂၀) ကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၇) ရက်နေ့ ၁၃:၀၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက် သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ အစည်းအဝေးတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများ ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (DACU) သို့ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ရုံးမှ လွှဲပြောင်းပေးပို့လာသည့် အမှာစာများ၊ စီးပွားရေးရာကော်မတီမှ သဘောထားမှတ်ချက် တောင်းခံ လာသည့် အမှာစာများ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများမှ တင်ပြလာသည့် အမှာစာများအပေါ် စိစစ် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာ မူဝါဒပါ လုပ်ငန်းစဉ်များ ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်နိုင် ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အစည်းအဝေးသို့ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ ဒုတိယဝန်ကြီး…
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဒါနန်းမြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မဲခေါင်သိပ္ပံအုပ်ချုပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့အစည်းအဝေး (၂/၂၀၁၉) သို့ တက်ရောက် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်
သတင်းBy phyu su htwe ဒီဇင်ဘာ 20, 2019
ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) က ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာ အစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ဆိုင်ရာ နားလည်မှုစာလွှာ (Letter of Understanding- LoU) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ ကျင်းပခြင်း။
သတင်းBy phyu su htwe ဒီဇင်ဘာ 16, 2019
နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာလ (၁၃) ရက် ။ ။ ကမ္ဘာ့စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ် (WFP) က မြန်မာ နိုင်ငံတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မဟာဗျူဟာအစီအစဉ် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် နားလည်မှုစာလွှာ (Letter of Understanding – LoU) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ ရက် (သောကြာနေ့) မွန်းလွဲ ၀၂:၀၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁) အစည်းအ‌ဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ နားလည်မှုစာလွှာကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် WFP Country Director and Resident Representative ဖြစ်သူ Mr. Stephen Anderson…
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် အီတလီနိုင်ငံ AICS ၏ Country Director ဖြစ်သူ Mr. Walter Zucconi တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုမှတ်တမ်း
သတင်းBy phyu su htwe အောက်တိုဘာ 30, 2019
၁။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် အီတလီနိုင်ငံ AICS ၏ Country Director ဖြစ်သူ Mr. Walter Zucconi တို့သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက် ၊ နံနက် (၁၁:၃၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၁)၊ နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၂။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ဒုတိယအကြိမ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးဆွေးနွေးပွဲ (2nd Development Effectiveness Roundtable) တွင် AICS မှ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းများ၏ အရည်အသွေး တိုးမြှင့်စေရန်အတွက် အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ…
ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Development Assistance Coordination Unit – DACU) (၁၅ / ၂၀၁၉) အစည်းအဝေး ကျင်းပ
ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Development Assistance Coordination Unit – DACU) ၏ (၁၅ / ၂၀၁၉) အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၉ ရက်၊ နံနက် (၉) နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးသို့ ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းရဲပိုင်ဟိန်း၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဗရတ်ဆင်း၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်စီစီပြုံးနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန မှ တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံခြားအကူအညီ အထောက် အပံ့/ချေးငွေတို့ဖြင့်…
သတင်းBy phyu su htwe အောက်တိုဘာ 29, 2019
၂၅-၁၀-၂၀၁၉၊ နေပြည်တော် မြန်မာ – UNICEF ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနိုင်ငံဆိုင်ရာ အစီအစဉ် (၂၀၁၈–၂၀၂၂) အရ အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် Multi-Year Work Plan (2018-2019) အား နှစ်ပတ်လည် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Multi-Year Work Plan (2020-2021) အတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ Park Royal Hotel ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် UNICEF Deputy Representative Mr. Paul Edwards တို့က အမှာစကားများ ပြောကြားခဲ့သည်။ အစည်းအဝေး သို့တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များမှ လူမှုရေးဝန်ကြီးများ၊ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ စီမံကိန်းကို ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်…
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် KOICA မှ Chief Representative ဖြစ်သူ Ms. Lee Youn Soo တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သတင်းBy phyu su htwe အောက်တိုဘာ 7, 2019
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာ ၃ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီး ဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် ကိုရီးယား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (KOICA) မှ Chief Representative ဖြစ်သူ Ms. Lee Youn Soo တို့ သည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက် ၊ ညနေ (၁၅:၀၀) နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၁)၊ နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် KOICA က ဆောင်ရွက်နေသည့် / ဆောင်ရွက်ရန်ရှိသည့် Program များ၊ Country Portfolio Evaluation နှင့် Satisfactory Surveys တိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အနာဂတ်ကာလတွင် ပြုလုပ်မည့်…
သတင်းBy phyu su htwe အောက်တိုဘာ 1, 2019
၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်၊ နေပြည်တော် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့(DACU) နှင့် ပူးပေါင်းမိတ်ဖက်များအဖွဲ့ အစည်း အဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်တွင် Park Royal ဟိုတယ်၊ နေပြည်တော်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့(DACU) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ(၂) ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ GDP ဖွံ့ဖြိုးမှု၊ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု(FDI)နှင့် ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အခြေအနေများ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် Global Partnership for Effective Development Cooperaiton(GPEDC) အဆင့်မြင့်အရာရှိများအစည်းအဝေးသို့ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့သည့် အတွေ့အကြုံကောင်းများ၊ ဖွံဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာမူဝါဒ(Development Assistance Policy-DAP) ကို မွမ်းမံပြင်ဆင်ခြင်း၊…
ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (DEVELOPMENT ASSISTANCE COORDINATION UNIT – DACU) ၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ကျင်းပ
သတင်းBy phyu su htwe စက်တင်ဘာ 27, 2019
( ၂၅ – ၉ – ၂၀၁၉ ) ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Development Assistance Coordination Unit – DACU) ၏ (၁၃ / ၂၀၁၉) အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်၊ နေ့လည် (၁) နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်း အဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးသို့ ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် စက်မှု ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဒေါက်တာမင်းရဲပိုင်ဟိန်း၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဗရတ်ဆင်း၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာနနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ…
သတင်းBy phyu su htwe စက်တင်ဘာ 26, 2019
(၂၄–၉–၂၀၁၉) ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဗဟိုအဖွဲ့အစည်းများမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင် ရွက်လျက်ရှိသည့် ပြည်ပ အကူအညီ၊ အထောက်အပံ့၊ နည်းပညာ နှင့် ချေးငွေ စီမံချက်များ အတွက် ပေးပို့ရမည့် အစီရင်ခံစာများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၄-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ နေ့လည် ၁ နာရီ အချိန်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ဦးဆောင်၍ ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ပ အကူအညီ၊ ချေးငွေစီမံချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စီမံချက်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ၊ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများ၊ စီမံချက်များ အပေါ် Monitoring & Evaluation ဆောင်ရွက်ရမည့် အစီအစဉ်များ၊ အစီရင်ခံစာ ပေးပို့ရာတွင် အသုံးပြုရမည့် Template ပုံစံများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။…
အေအီးစီ၂၀၂၅အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်အကဲဖြတ်လေ့လာခြင်းပြုလုပ်မည့် Country Visit နှင့်စပ်လျဉ်း၍အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
သတင်းBy phyu su htwe စက်တင်ဘာ 19, 2019
နေပြည်တော်၊ ၁၈-၉-၂၀၁၉ ရက်နေ့ အေအီးစီ၂၀၂၅အကောင်အထည်ဖော်မှုအတွက်အကဲဖြတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခြင်းပြုလုပ်မည့်Country Visit နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ(၁၈)ရက်နေ့၊ နေ့လယ်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ် ဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၁)နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဉီးသန်းအောင်ကျော်က အာဆီယံ အတွင်းရေး မှူးချုပ်ရုံးမှ ဦးဆောင်၍ Country Visit လာရောက်မည့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားမှု အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည်။ ထို့နောက် တက်ရောက်လာသူ ဌာနဆိုင်ရာများမှ ဘာသာရပ်တာဝန်ခံများက မိမိဌာနအလိုက် ပြင်ဆင်ထားမှုများကို ဆွေးနွေးကြခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံစီးပွားရေးအသိုက်အဝန်းကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည့်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေး နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊…
သတင်းBy phyu su htwe စက်တင်ဘာ 18, 2019
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ၁၉၉၇ ခုနှစ်မှာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများအသင်း (အာဆီယံ) ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပြီး စနစ်တကျ ရေးဆွဲထားတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မူဘောင်တွေနဲ့အညီ အခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့တန်းတူ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် (၁၀) နိုင်ငံ ပါဝင်တဲ့ အာဆီယံ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ (ASEAN Free Trade Area-AFTA) ကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာ ထူထောင်ခဲ့သလို ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံ (၆) နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ ဩစတြေးလျနဲ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတို့နဲ့လည်း ASEAN+1 လို့ခေါ်ဆိုနေကြတဲ့ အာဆီယံနဲ့ အပေါင်းတစ် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ (၅) ခု ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ ဟာလည်း အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ ASEAN+1 လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်မှုဒေသဆိုင်ရာ နိုင်ငံတွေနဲ့ စီးပွားရေး…
ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု (RCEP) နှင့် စပ်လျည်း၍ လက်ရှိညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နေမှုများ ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအားရှင်းလင်းဆွေးနွေး
သတင်းBy phyu su htwe စက်တင်ဘာ 16, 2019
၂၀၁၉ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ၁၃ရက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသ ထူထောင်ထား သောနိုင်ငံများနှင့် ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ဦးဆောင်၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များသို့ ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အစီအစဉ်ကို၂၀၁၉ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၃ရက်နေ့၊၁၃:၀၀နာရီတွင် Learning Centre Room (1)၊ ဇမ္ဗူသီရိဆောင်၊ လွှတ်တော်ဝင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြသည့် အစီအစဉ်သို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများမှ ဒေသတွင်းဘက်စုံစီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများတွင် ပါဝင်ဆွေးနွေးလျက်ရှိသည့် ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များစုစုပေါင်း (၆၃)ဦးခန့် တက်ရောက် ခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးအောင်နိုင်ဦးက လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသများအကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ (WTO) နှင့် လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသများ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု အကြောင်း၊ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဒေသများ၏ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအကြားကုန်သွယ်မှုနှင့်…
သတင်းBy phyu su htwe ဩဂုတ် 9, 2019
သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ စီးပွားရေးရာကော်မတီသို့ တင်ပြမည့် စာချုပ်စာတမ်း (မူကြမ်း)များအပေါ် အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါနှင့် စာချုပ်စာတမ်းရေးထုံး မှန်ကန်စေရေးကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်ရုံးတို့မှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အစီအစဉ်အရ စိစစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အင်္ဂလိပ်သဒ္ဒါနှင့် စာချုပ်စာတမ်းရေးထုံးမှန်ကန်စေရေး အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်နေ့ နှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တို့တွင်လည်း အထက်ပါ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအစီအစဉ်အတိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း အစည်းအဝေး (၃)ကြိမ် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊…
ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Development Assistance Coordination Unit – DACU) ၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
သတင်းBy thin zar ဇူလိုင် 25, 2019
ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Development Assistance Coordination Unit – DACU) ၏ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက်နေ့ နေ့လည် ၁:၀၀ နာရီတွင် ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးသို့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်သည့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဗရတ်ဆင်း၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်စီစီပြုံး၊ မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်း(MDI) အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးမင်းရဲပိုင်ဟိန်းနှင့် နည်းပညာ အကြံပေး အဖွဲ့ဝင်များ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူး သန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊…
ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့(Development Assistance Coordination Unit – DACU) လုပ်ငန်းအဆင့် အစည်းအဝေး (၉/၂၀၁၉) ကျင်းပ
သတင်းBy phyu su htwe ဇူလိုင် 4, 2019
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂ ရက် ,နေပြည်တော် ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ (Development Assistance Coordination Unit – DACU) လုပ်ငန်းအဆင့် အစည်းအဝေး (၉/၂၀၁၉) ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးသို့ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ ဖွံ့ဖြိုးမှု အကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယ ဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီများညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့် စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်၊ ငွေတိုက်ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်စီစီပြုံး၊ မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအဖွဲ့အစည်း(MDI) အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ ဦးမင်းရဲပိုင်ဟိန်းနှင့်…
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူးတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သတင်းBy phyu su htwe ဧပြီ 30, 2019
နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီ ၂၉ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဉီးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဉီးသန်းအောင်ကျော်သည် ၂၉-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့ နံနက် (၉:၀၀) နာရီတွင် မြန်မာ နိုင်ငံဆိုင်ရာ ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံသံရုံးမှ စီးပွားရေးသံမှူးဖြစ်သူ Mr. Yang Dong Woo ကို နေပြည်တော်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (ရုံးအမှတ်-၁)၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာနတွင် လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် နှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
စတုတ္ထအကြိမ် My Governance စီမံချက် ဦးဆောင်ကော်မတီ အစည်းအဝေးကျင်းပ
သတင်းBy phyu su htwe ဧပြီ 11, 2019
အီးယူ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် GOPA Worldwide Consultant အဖွဲ့က အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော Institutional Strengthening and Policy Dialogue Support(My Governance)စီမံချက်၏ စတုတ္ထအကြိမ် စီမံချက်ဦးဆောင်ကော်မတီအစည်း အဝေးကို ယနေ့ ၁၃း၃၀ နာရီမှ ၁၆း၀၀ နာရီအထိ နေပြည်တော်ရှိ အမရာဟိုတယ်၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို My Governance စီမံချက် ဦးဆောင်ကော်မတီ၏ ပူးတွဲဥက္ကဋ္ဌများဖြစ် ကြသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက် သွယ်ရေးဉီးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဉီးသန်းအောင်ကျော်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပ သမဂ္ဂရုံးမှ Deputy Head of Cooperation ဖြစ်သူ Mr. Pedro Campo Llopis တို့က ဦးဆောင်ကျင်းပခဲ့ပြီး သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ…
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့အတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ယန်း သန်း ၃၂၀၀ ကျော် အကူအညီပေးမည့် စာချွန်လွှာ (၂) စောင် လက်မှတ်ရေးထိုး
သတင်းBy phyu su htwe ဧပြီ 10, 2019
နေပြည်တော် ဧပြီလ ၁၀ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရသို့ ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရမှ အကူအညီပေးရေးဆိုင်ရာ စာချွန်လွှာ (၂) စောင် လက်မှတ်ရေးထိုးလဲလှယ်ခြင်း အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၁၀ ရက်နေ့ နံနက် ၉:၃၀ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁) အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အခမ်းအနားသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးလှကျော်၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးသာဦး၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်များနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Ichiro MARUYAMA နှင့် ဂျပန်သံရုံးမှ…
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော် က JBIC မှ DG ဖြစ်သူ Mr. Fumio Suzuki ဦးဆောင်သော အဖွဲ့နှင့်တွေ့ဆုံ
သတင်းBy thin zar ဧပြီ 10, 2019
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်အား ဂျပန်နိုင်ငံ၊ Japan Bank for International Cooperation (JBIC), New Energy and Power Finance Department II မှ Director General ဖြစ်သူ Mr. Fumio Suzuki ဦးဆောင်သော အဖွဲ့မှ Project Promoting Vehicle (PPV) တည်ထောင်ရန်အတွက် ရုံးခန်းဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးနှင့် နှစ်ဖက်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ၈-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ (၁၆း၀၀) နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁) ၌ လာရောက်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ နေပြည်တော်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၈
ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ Korea EXIM Bankနှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား EDCF Meeting ကျင်းပ
သတင်းBy phyu su htwe ဧပြီ 5, 2019
နေပြည်တော်၊ ဧပြီ ၁ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၊ Korea EXIM Bank မှ Directorဖြစ်သူMr. Kim, Yu-Shinတို့ ဦးဆောင်၍ Korea EXIM Bank နှင့် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့အကြား EDCF Meeting ကို၁-၄-၂၀၁၉ ရက်၊ နံနက် ၁၀: ၀၀ နာရီမှ ၁၂: ၀၀ နာရီထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁)၊ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ EDCF Meeting တွင် ၂၀၁၈- ၂၀၂၂ ခုနှစ်အတွက် Economic Development Cooperation Fund-EDCF ချေးငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း (၁၀၀၀) ပေးအပ်ရေးဆိုင်ရာ မူဘောင်အစီအစဉ်နှင့် ၎င်းမူဘောင်အစီအစဉ်အောက်မှ…
အာဆီယံ အဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ၏ (၂/၅၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး
လာအိုနိုင်ငံ၊ ဗီယင်ကျန်းမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၄ ရက်နေ့မှ ၈ ရက်နေ့အထိ အာဆီယံအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ၏ (၂/၅၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးနှင့် ဆက်စပ် အစည်းအဝေးများကို Lao Plaza ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး တက်ရောက်ပါသည်။ အာဆီယံအဆင့်မြင့်စီးပွားရေးအရာရှိများ၏ (၂/၅၀) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို ၄-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့နှင့် ၅-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့တို့တွင် ကျင်းပပြီး အာဆီယံနှင့် ဆွေးနွေးဖက်နိုင်ငံ များဖြစ်သည့် တရုတ်၊ ဂျပန်၊ ကိုရီးယား၊ အမေရိကန်၊ ကနေဒါနိုင်ငံနှင့် အပေါင်းသုံးနိုင်ငံများနှင့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးများကို ၆-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့မှ ၈-၄-၂၀၁၉ ရက်နေ့အထိ ကျင်းပပါသည်။ အစည်းအဝေးများတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ အာဆီယံအလှည့်ကျ…
ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံများ မြှင့်တင်ရေးစီမံချက်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် လဲလှယ်ပွဲအခမ်းအနား
သတင်းBy phyu su htwe မတ် 22, 2019
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပညာရေးကဏ္ဍ တိုးတက်မြင့်မားရေးအတွက် ဥရောပသမဂ္ဂ၏ အထောက်အပံ့ ယူရို ၂၂၁ သန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်မည့် ပညာရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံများ မြှင့်တင်ရေး စီမံချက်နှင့်စပ်လျဉ်း သည့် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် (Financing Agreement for Enhancing the Education and Skills base in Myanmar) လဲလှယ်ပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ချီးမြှင့်သည်။ အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဖြစ်ကြသည့် ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးနှင့် ဦးစိုးဝင်း၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊…
(၃၅)ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (35th HLTF -EI) အစည်းအဝေး
သတင်းBy phyu su htwe မတ် 16, 2019
(၃၅) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံ စီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (35th HLTF -EI) အစည်းအဝေးကို ထိုင်းနိုင်ငံ၊ ဗန်ကောက်မြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့မှ ၁၃ ရက်နေ့ အထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော် တက်ရောက်ခဲ့ ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ အာဆီယံ (၁၀) နိုင်ငံမှ အာဆီယံစီးပွားရေးပေါင်းစည်းမှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်များနှင့်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အာဆီယံအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရုံးမှ တာဝန်ရှိ သူများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ကိုယ်စားလှယ် (၃၀) ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ အာဆီယံအလှည့်ကျ ဥက္ကဋ္ဌတာဝန် ထမ်းဆောင်စဉ် ဆောင်ရွက်ရ မည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ခြင်း၊…
မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရ၏ အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများလွယ်ကူချောမွေ့စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း
သတင်းBy phyu su htwe မတ် 15, 2019
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ၊ နိုင်ငံတကာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (China International Development Cooperation Agency – CIDCA) တို့ ဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ အစိုးရ၏အကူအညီဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် စီမံကိန်းများလွယ်ကူ ချောမွေ့ စွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အစည်းအဝေးကို ၁၄-၃-၂၀၁၉ ရက်နေ့၊ နေ့လယ် ၃ နာရီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ် (၁) ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးသို့ မြန်မာဘက်မှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သာသနာရေးနှင့် ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ် ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆောက်လုပ် ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ …
Socialization Meeting of Regulatory Management System ကို ကျင်းပ
သတင်းBy administrator မတ် 15, 2019
အာဆီယံနှင့်အရှေ့အာရှစီးပွားရေးသုတေသန(အီးအာရ်အိုင်အေ)နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာနတို့ ပူးပေါင်း ၍ ပြုလုပ်သည့် Socialization Meeting of Regulatory Management System ကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၈ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော် ရွှေနန်းတော်ဟိုတယ်၌ ကျင်းပပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစည်းအဝေးသို့ အီးအာရ်အိုင်အေမှ ကျွမ်းကျင်သူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ သုတေသန ပညာရှင်များ၊ ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊ စီးပွားရေး နှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဆောက်လုပ် ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား လာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၊ နိုင်ငံခြား စီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှု လက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်တို့မှ ဘာသာရပ်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များ အပါအဝင် စုစုပေါင်း ၃၀…
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် KOICA မှ WFK Program Manager ဖြစ်သူ Ms. Lee Ji Sun တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သတင်းBy administrator မတ် 11, 2019
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (KOICA) မှ World Friend Korea Volunteers (WFK Volunteers) ၏ Program Manager ဖြစ်သူMs. Lee Ji Sun တို့သည် ၇-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ နေ့လည် ၂ : ၀၀နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၁)၊ နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြ ပါသည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် KOICA အနေဖြင့် ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ စတင်၍ ဝန်ကြီးဌာနများ၏ သက်ဆိုင်ရာ နယ်ပယ်များအလိုက် စေလွှတ်လျက်ရှိသော WFK Volunteer Program အစီအစဉ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အနာဂတ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။…
သတင်းBy phyu su htwe မတ် 4, 2019
၁။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်မို့မို့နိုင်နှင့် ထိုင်းနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (TICA) မှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. BanchongAmornchewin တို့က ဦးဆောင်၍ မြန်မာ- ထိုင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ၃ နှစ် အစီအစဉ်(၂၀၁၉-၂၀၂၁)မူကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းအစည်း အဝေးကို နေပြည်တော်ရှိM Gallery ဟိုတယ်၌၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်မှ ၂၇ ရက်ထိကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၂။ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ၊ ပညာရေးကဏ္ဍ၊ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးနှင့် ငွေရေးကြေးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ လူမှုအသိုင်းအဝန်းတိုးတက်ရေးကဏ္ဍစသည့် ကဏ္ဍ(၅) ခုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစီအစဉ်များ၊ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ နည်းဗျူဟာများ၊ အကောင်အထည် ဖော်မည့် စီမံကိန်းများနှင့်လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ၊ စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မည့်ဒေသများနှင့် ရရှိမည့် အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ၃။ (၃)…
နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်နှင့် KOICA မှ Senior Deputy Representative ဖြစ်သူ Mr. KIM Jihoon တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
သတင်းBy thin zar ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 28, 2019
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော်နှင့် ကိုရီးယားအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအေဂျင်စီ (KOICA) မှ Senior Deputy Representative ဖြစ်သူ Mr. KIM Jihoonတို့သည် ၂၂-၂-၂၀၁၉ ရက်၊ နေ့လည် ၁ : ၁၅ နာရီတွင် ရုံးအမှတ် (၁)၊ နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနများမှ KOICA အကူ အညီဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် စီမံကိန်းများနှင့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် ကိုရီးယားသမ္မတနိုင်ငံ၌ ကျင်းပမည့် Global Fellowship Program (GFP) များသို့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်တက်ရောက်နိုင်ရေးတို့နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၉
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ နှင့် FAO တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ
သတင်းBy administrator ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 21, 2019
နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၉)ရက်။ ။ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ကုလသမဂ္ဂ စားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ (FAO) တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်မူဘောင် (Country Programming Framework-CPF) လက်မှတ် ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားကို ၁၉-၂-၂၀၁၉ ရက် (အင်္ဂါနေ့) တွင် နေပြည်တော်ရှိ Kempinski Hotel ၌ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ နိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်မူဘောင်ကို ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရကိုယ်စား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ နိုင်ငံခြားစီးပွား ဆက်သွယ်ရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းအောင်ကျော် နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ FAO ကိုယ်စားလှယ် Ms. Xiaojie Fan တို့က စီမံကိန်းနှင်ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးဆက်အောင်နှင့် FAO လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် နှင့် အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ…